हराइरहेको व्यक्ति (Nepali) — The Suitcase Detective
हराइरहेको व्यक्ति (Nepali)
खोजी कहिले पनि रोक्नुहोस्
Nepali is not our native language. If you believe our translation is incorrect, please let us know in the comments.
नेपाली हाम्रो मातृभाषा होइन। यदि तपाइँ हाम्रो अनुवाद गलत छ भनेर विश्वास गर्नुहुन्छ भने, कृपया हामीलाई टिप्पणीहरूमा जानकारी दिनुहोस्।.
“Never Quit Looking” हराइरहेको व्यक्तिको वैश्विक डेटाबेस, समाधान नगरिएका मृत्यु, र अज्ञात शरीरहरू हुन्। हामी तपाईंको परिवार हराइरहेको व्यक्ति फेला पार्न र मृतकलाई न्याय प्रदान गर्न चाहन्छौं।
एक मामला साझा गर्न को लागी, तलको फारम पूरा गर्नुहोस्। अतिरिक्त जानकारी वा छविहरु neverquitlooking@pm.me लाई ईमेल गर्न सकिन्छ।
यदि त्यहाँ विवरणहरु तपाइँ प्रदान गर्न सक्नुहुन्न, त्यो प्रश्न खाली छोड्नुहोस्। त्यहाँ जानकारी को मात्र तीन आवश्यक टुक्राहरु छन्:
१) पीडितको उपनाम
२) पीडितको पूर्व नाम
३) प्रमाण खुलेको छ र चलिरहेको छ (उदाहरण को लागी, पुलिस बाट सार्वजनिक सूचना को लिंक; अखबार लेख; आदि)
जे होस्, कृपया सकेसम्म धेरै विवरण दिनुहोस्।
हाम्रो डाटाबेस अंग्रेजी मा व्यवस्थित छ; जे होस्, तपाइँ आफ्नो मातृभाषा मा यो फारम पेश गर्न सक्नुहुन्छ। अनुवाद छोटो बनाउन को लागी कृपया छोटो, सरल शब्दहरु र वाक्यहरु को उपयोग गर्नुहोस्।
हामी निर्दोष मानिसहरु जो अवस्थित हुन चाहँदैनन् जोगाउन चाहन्छौं। हामी मात्र पुलिस को लागी सम्पर्क जानकारी समावेश गर्दछौं। हामी एक व्यक्ति को लागी सम्पर्क जानकारी समावेश गर्दैनौं।
सधैं पहिले पुलिस लाई सम्पर्क गर्नुहोस्। कुनै नयाँ जानकारी वा साक्षीहरु सिधै पुलिस लाई पठाइनेछ। तसर्थ, पुलिस फाइल मा एक मामला हुनु पर्छ।
हामी एक सूचना हटाउनेछौं यदि हामी निम्न व्यक्तिहरु द्वारा सम्पर्क गरीएको छ:
Or पुलिस वा सरकारी एजेन्सी
यदि हामी निम्न व्यक्तिहरु द्वारा सम्पर्क गरीएको छ भने हामी एक सूचना हटाउनेछौं:
प्रहरी वा सरकारी निकाय
प्रश्न मा व्यक्ति (पहिचान को प्रमाण पछि दिईएको छ)
प्रश्न मा व्यक्तिको एक कानूनी प्रतिनिधि (पहिचान को प्रमाण दिईएको पछि)
यदि हामीलाई शंका छ कि संलग्न व्यक्ति शरणार्थी वा शिकार हो जो लुकेको छ
छ महिना भन्दा कम पुराना फाइलहरु मात्र हाम्रो ब्लग मा साझा गरिनेछ।
छ महिना भन्दा पुराना फाइलहरु डाटाबेस मा जोडिनेछ
कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् जब त्यहाँ एक अपडेट छ।
हामी एक बन्द मामला हटाउनेछौं।
मामला संसार मा कहीं बाट उत्पन्न गर्न सक्नुहुन्छ। यो राष्ट्रियताको बावजुद साझा गरिनेछ।
अनुरोधहरु क्रम मा प्राप्त गरीरहेका छन्।
हामी कानूनी कारणहरु को लागी “आमा बुबा अपहरण” समावेश गर्दैनौं।
यी अनुवाद अनौपचारिक हुन्। यदि तपाईं नेपालीको मूल वक्ता हुनुहुन्छ र हाम्रो अनुवाद सम्पादन गर्न सक्नुहुनेछ भने हामी यसको कदर गर्दछौं।.
हराइरहेको व्यक्ति वा एक व्यक्ति जो पहिचान गर्न सकिँदैन – Missing Person Poster
मेमोरियम – Unsolved Crime Poster